खाली पेटमा खान नहुने खानेकुरा के–के हुन् ? - Gandak News
खाली पेटमा खान नहुने खानेकुरा के–के हुन् ?
गण्डक न्यूज द्वारा ९ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०१:२६ मा प्रकाशित 0
उचित मात्रामा, उचित समयमा खाइने खानेकुरा स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ । कतिपय खानेकुरा यस्ता हुन्छन्, जो भोको पेटमा वा खाली पेटमा खानु हुँदैन । अरुबेला फाइदाजनक भएपनि खाली पेटमा सेवन गर्दा त्यस्ता खानेकुराको नकारात्मक असर पर्छ । त्यसैले स्वस्थ्य जीवनशैली अपनाउन चाहनेले जान्नैपर्छ, खाली पेटमा खान नहुने खानेकुरा के–के हुन् भनेर ।